Northgard ine itsva yemahara yekuvandudza inonzi Ragnarok | Linux Vakapindwa muropa
Northgard ine itsva yemahara yekuvandudza inonzi Ragnarok
Kana iwe uri fan of Northgard zano revhidhiyo mutambo iwe unozoziva kuti ikozvino ine hombe nyowani nyowani inowanikwa. Iyi nyowani yemukati yekugadzirisa ndeyemahara izvo inonzi Ragnarok uye uchauya kuLinux, Mac uye Windows. Kana iwe usati uchiziva iwo mutambo wevhidhiyo unogona kuuwana muzvitoro zveValve Steam uye zvakare muHumble Store nemutengo unosvika € 29,99 kana madhora (yekutendeuka kunofadza kunotirwadza zvakanyanya kuvaEuropean).
Chokwadi iwe unotoziva kuti ndeupi zita, kunyanya kana iwe ukatitevera paLxA, sezvo isu takanyora zvimwe zvinyorwa nezve ino vhidhiyo mutambo usati. Iri zano rakabudirira pa vikings uye izvo zvakagadziriswa neFrench yakazvimirira situdiyo Shiro Mitambo. Zvino ivo vaita izvi kuwedzera kwemahara imwe yehukuru hwako. Neichi chino gadziriso iwe unowana zvakawanda zvemukati izvo zvatiri kuenda zvino kutsanangura.
Ragnarok inosanganisira mepu nyowani iyo iwe yaunogona kushandisa nematambudziko matsva. Mepu iyi inosanganisira gomo idzva rine mhirizhonga pakati rinoputika zvisina mwero nenguva, saka uchagara uchifanirwa kugadzirira mhedzisiro yakadai semhedzisiro inogona kukuvadza zvivakwa zvako kana matunhu, nezvimwe. Iwe zvakare unozokwanisa kuwedzera nekukorokoza nharaunda nyowani «Guva rekare», iyo nzvimbo yakagara varwi veViking vakadonha uye kuti iwe unogona kupora kubva paupenyu hwapashure kuumba uto revatariri ...
Vafambisi vechikepe vakadonha vanoonekwawo, uye izvo zvichaita kuti mweya yevakafa vakanyura vade kudzokera kunyika yevapenyu futi, saka uchafanirwa kuramba uine mamwe maziso kumahombekombe ... vane hasha erima elves uye kuti ivo vacharwisa kuti vakuise pamusoro pako zvakanyanya kuoma uye kuti dambudziko racho rinonakidza. Uye chekupedzisira, kukunda vavengi kana kurasikirwa neyuniti ikozvino kuchapa vatambi ruzivo mapoinzi ekusarudza kubva kumatatu matsva anowanikwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Northgard ine itsva yemahara yekuvandudza inonzi Ragnarok
Iwe ikozvino wagadzirira kurodha iyo nyowani vhezheni ye antiX 17.2